KALA DUWANAANSHAHA CANABKA "MOLDOVA" - VITICULTURE
Ka mid ah jilicsan canab ah delicious, malaha, ma jiri doonaan kuwa aan maqlin oo ku saabsan Moldova kala duwan.
Canabkani wuxuu si fudud u caan ku yahay, taas oo uu aad ugu jecel yahay growers growers.
Waxay leedahay iska caabin aad u sareeya iyo daryeel aan qabyo ahayn.
In kasta oo xaqiiqda ah in noocyada kala duwan ma haysan kooxo waaweyn iyo nooca berry, waxaa weli soo jiidata fiiro gaar ah oo dalagyo dhadhan fiican leh.
Si aad u ammaanto noocyada kala duwan ee canabka "Moldova" waxay noqon kartaa mid aan qarsooneyn, laakiin si aan caadi aheyn, waxaan u soo bandhigno wax kasta oo si faahfaahsan loona soo koobay.
Sidaa darteed kama baqaysid dhibaatooyinka ka soo baxa marka la beero iyo daryeelidda canab, hoosta waxaan u qaybinaynaa qaybta oo dhan si sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan geedi socodkan.
"Moldova" ee sharafta oo dhan: sharraxaad kala duwan oo canabka ah
Tani waa mid aad u wayn, laakiin ma ahan mid caan ah, noocyada canabkana waxaa lagu soo rogay Moldova oo dhan koox ka mid ah qorayaasha. Noocyada noocan ah sida "Guzal Kara", noocyo kala duwan oo canab ah iyo "Save Villar 12-375", waxay ahaayeen waalidiinta "Moldova". Waxaa si ballaadhan loogu soo dhaweeyay dhulka Ukraine ee tan iyo 1987.
Waxay muujisaa dhalid wanaagsan oo ku nool gobollada koonfureed ee Ruushka (badanaa gobolka Rostov, gobolka Krasnodar). Kala duwanaanshaha waxaa loo tixgeliyaa iskudhaf dhexdhexaad ah oo ka mid ah gobolka Euro-Asia. Mararka qaarkood kala duwanaanta noocaas ah waxaa laga helaa magaca 'Coding of the late'.
Faahfaahin faahfaahsan oo canab ah "Moldova"
Tirada canabku ee "Moldova" ma ahan mid aad u ballaaran. Dhexdhexaadintu way ka badan yihiin, inkasta oo koox kasta ay calaamad u tahay joogitaanka kooxo waaweyn. Cunto canab ah ayaa isbedbeddelaya min 350 garaam ilaa 1 kilomarar dhif ah ayaa ka sarreysa shaxdan. Kooxaha ayaa badanaa ah qaababka qaababka, mararka qaarkood waxay sameeyaan "baalal". Cufnaanta berriga caadi ahaan waa dhexdhexaad, laakiin waxaa jira sidoo kale kooxo dabacsan.
Xajmiga dhirta canabka ah ee kala duwan ee noocyadaasi waa kuwo ballaadhan, miisaankooda celcelis ahaan waa qiyaastii 6-7 garaam. Celceliska dhererka ee berry waa 2.2 sentimitir, iyo width - 1.9. Berry-ka qaababka lafaha leh waxay leeyihiin madow madow, ku dhowaad madow, midab maqaar. Sidoo kale, maqaarka of this berry ah waa mid aad u cufan iyo wax yar ka yar, daboolay dunta qaro weyn.
Iyada oo ay ku xiran tahay tayada la tilmaamay ee diirka, berry ee noocyada kala duwan "Moldova" si aad u fiican u dulqaadashada gaadiidka iyo awoodaan in lagu kaydiyo muddo dheer. Qaab dhismeedka caleemaha canab ah "Moldova" waa mid aan fiicneyn, oo leh calool xanuun. Tirada abuurka ee berry waa yar yahay, badanaa ku koobnayd 2-3, inkastoo mararka qaar ay dhacdo 4.
Waxaa haboon in la xuso in dhadhanka this berry kuwan waa wax fudud, laakiin macaan. Gaar ahaan, dhadhanka canabka cusub ayaa lagu qiyaasaa 8 dhibcood, horeyna marka miraha la hagaajiyo iyadoo la yareeyo heerkulka acidity, taas oo u oggolaatay tasters inay qiimeeyaan canabkaa sida 9 dhibcood. Sidoo kale, waa wax aan macquul ahayn in aan u fiirsan heerarka sare ee content sonkorta ee ka kooban kiimikada ee berry ah ee kala duwan ee sabiib this.
Iyada oo tilmaamayaasha casiir ah "acid Moldova" 8-9 g / l, tilmaamayaasha macaanka waa 18-19%. Si kastaba ha noqotee, dareenka ah ee berry ayaa si tartiib ah u dhacaa, tan iyo markii isku dhafka ee sonkorta, taas oo sababa hoos u dhigista aashitada, waxay u dhacdaa si tartiib tartiib ah.
Ujeedada noocani waa mid aad u ballaaran. Sababtoo ah muddada dheer ee kaydinta, waxay weli isku mid tahay, xitaa waxay hagaajisaa dhadhanka, xitaa 150 maalmood ka dib markii canab la jaray. Marka lagu daro isticmaalka cusub, canabkani waxay soo saartaa ilaalin aan caadi aheyn - sumcadda iyo xataa macaanka.
Waqtiga lagu jiro Bisaylkiisa iyo dhalid canab "Moldova"
Jiiska miiska waxaa iska leh noocyada dambe. Xilliga daaqsinka ah ee "Moldova", laga bilaabo xilliga canab si uu u bislaado canabku wuxuu soconayaa 155-165 maalmood. Marka laga beerto noocyada kala duwan ee gobollada waqooyiga badan, berry ayaa laga yaabaa in uusan u bislaadaan dhamaadka, haray halkii dhanaan. Si kastaba ha ahaatee, goosashada dheer ee la sugi doono ayaa shaki la'aan ah qof kasta: laga bilaabo baadiyaha 8-10 sano jir ah waad goosan kartaa ilaa 150 kiiloogar oo tayo wanaagsan leh.
Iyadoo beeritaanka xoogga leh ee canab "Moldova" waxaad ku gaari kartaa wax-soo-saarka 150-165 oo ka mid ah hal hektar oo geedo ah. Xiddigaha loo isticmaalo xayawaanku waxay inta badan ku xiraan tilmaamayaasha dhalidda ee 4 kiiloogaraam mitir hal mitir oo ah baadiyaha.
Saameynta sare ee noocan oo kale ah ayaa la gaarsiiyey heer aad u badan sababtoo ah koritaanka xoogan ee Moldova baadiyaha kala duwan ee sabiib ah. Waxay si dhakhso ah u bilaabataa fruiting: wax soo saarka ugu horreeya waxaa la goostay 2-3 sano ka dib markii uu soo degay bogga. Iyada oo tilmaamaya tirada tirada caleemaha leh ee baadiyaha ah ee 70%, tirada kooxood ee ka muuqda sawir noocaas ah waa celcelis ahaan 1.7.
Fruiting fruiting ee canabku wuxuu ku fadhiyaa 5-6 knot ka sarraysa saldhigga geedka canabka ah. Ubaxyada baadiyaha canabka waa bisexual, sababtoo ah beeritaanka duurka ee noocyo kale oo sabiib ah aan loo baahan yahay pollination.
Tayada loo tixgeliyo faa'iidooyinka ugu weyn ee kala duwan ee canabka "Moldova"
Kala duwanaanshuhu waa mid aan hoos u dhicin daryeel, oo awood u leh is-isu-dhajinta.
Beergooyska, inkasta oo uu soo daahay, waa mid aad u sarreeya, oo si wanaagsan loo kaydiyey (160-180 maalmood) oo la qaado. Intaa waxaa dheer, kooxaha waa la kaydin karaa muddo dheer (haddii uu barafku aanu ku dhufanin) baadiyaha.
Miraha of canab khudradda Moldova waxay leedahay ujeeddo miisaan guud.
"Moldova" waxay leedahay heerar aad u sarreeya oo iska caabin ah oo ka yimaada cudurrada sida kilyaha iyo caaryada. Ma saameynayso qaabka asalka ah ee cayayaanka noocan oo kale ah sida phylloxera, taas oo ay sabab u noqon karto xididada u gaar ah.
Mawjadaha noocyada kala duwan ayaa si aan macquul ahayn u saameeyeen qolofta, maxaa yeelay waxay dillaacaan goor dambe.
Morozov si toos ah uma baqdo, wuxuu qaboobaa koonfurta gobolka iyada oo aan lahayn hoy. Qoryaha geedaha canabka ah ma saamaynayo marka heerkulku hooseeyo -22-23 ° S. Dad badan ayaa ku doodaya in xitaa dhaxan -26 ºS aanay khatar u ahayn noocyada kala duwan.
Noocyada Grapevine "Moldova" si fiican u cusbooneysiiyay ka dib markii la gooyey iyo dhaawac.
Dhibaatooyinka kala duwan ee "Moldova": waxa la tixgeliyo marka canab koraya
Kala duwanaantan ayaa saameyn ku yeelan karta cudur sida canabka ah sida oidiyum (dhoobo). Sidaa darteed, noocyada this canab ah waa in la buufin laba jeer xilli xilli hore for prophylaxis.
Inkasta oo xaqiiqda ah in la tufaaxay canab ku deyn kartaa baadiyaha muddo dheer, laakiin haddii aan la gooyin waqtigeeda, nolol shelf iyo fursadaha gaadiidka ayaa si weyn u yaraada.
Buulka canabka ayaa si aad ah u saameynaya culeyska iyo hoos u dhaca. Natiijada, tayada dalagga ayaa aad u yaraaday.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan guntinta goosashada saxda ah ee canab ee dayrta.
Beerta laga beerto "Moldova" - sidee loo mamnuucayaa jarida?
Canab beerto ayaa dhab ahaantii aad u shaqeynaya. Ka dib dhan, ma aha oo kaliya muhiim ah in la beero ama lagu beerayo jarida, laakiin waxaad u baahan tahay inaad doorato meesha saxda ah iyo ciidda. Canab lagu beeray waqtigii qaldanaa ayaa si xun u kori doona oo aad u xanuunsan kara. Laakiin waxyaabihii ugu horreeyay ee hore.
Ciidda beeritaanka canabku waa mid la doorbidi karo iftiin, hodan ku ah macdanta iyo Bacriminta. Canabtu waxay si aad ah u falcelin kartaa dhibcaha qoyaanka, sidaas darteed waa inay jirtaa nidaam dheecaan ah goobta. Haddii biyaha dhulka ku yaal ay ka sareeyaan 1.5 mitir - laguma talinayo in ay ku beeri canab dhan.
Si loo gaaro dhalidda ugu sarraysa ee canab Cinabta waa suurto gal inay u abuurto goobo aad u qorrax leh, oo aan dabayshu ka iman woqooyiga. Waxaa ugu wanaagsan in la beero si toos ah u dhow meelo canopies ama arbores, si ay canabku uga soo baxaan dhinaca koonfureed. Sidaa darteed, ma heli doono oo keliya xaaladaha ugu wanaagsan ee koritaanka, laakiin ma dhaafi doonaan sidoo kale, siinaya berry fursad ay ku helaan tirada tirooyinka ugu sareeya.
Hersiiyiin badan ayaa ku talin kara canab beerto xilliga gu'ga. Waqtigaan, wuxuu awoodi doonaa inuu dego oo ugu fiicnaado, ka hor inta uusan dhaxan xilliga jiilaalka koowaad. Laakiin weli, ay duurka u wanaagsan yihiin laga soo gooynta meeshoodii dayrta. Xeerka ugu weyn marka laga beerto - heerkulka hawada, labadaba guga iyo dayrta, inta lagu guda jiro beeritaanka waa in ay ahaataa mid aad u xasilloon ama joogta ah si uu u joogo 15ºS. Heerkulka dabiiciga ah waa inaanu hoos u dhicin 10 ºC.
Mashruuca abuur canab "Moldova"
By beerto noocyo kala duwan waa in la soo dhawaado iyadoo la tixgelinayo sifooyinka koritaanka ee baadiyaha. Ka dib oo dhan, canab "Moldova" wuxuu leeyahay koboc aad u xoogan oo uu leeyahay mawduuc aad u dheer, taas oo aan la aqbali karin isaga. Kaloorida xad dhaafka ah iyo xajmiga ballaaran ee baadiyaha ayaa saamayn ku leh tayada dalagga iyo waqtiga ay Bisaylkiisa. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo baadiyaha leh gacmo dheer oo dheer iyo meel bannaan oo loogu talagalay koritaanka. Beerta canabka ah, 5x4 qorshe mitir waa mid la aqbali karo.
Shuruudaha canab si toos ah loo beeray "Moldova"
Beerta "Moldova" waxaa lagu fulin karaa midkood ama xididadiisa ama adoo isticmaalaya kaydka duugoobay.
Marka goynta si toos ah loogu beerayo ciidda, waa in la qabtaa wakhti dheer oo biyaha ah ka hor inta aan la samaynin xididdada caddaanka ah. Aad bay muhiim u tahay in barta goynta ee jarista ay noqon doonto mid cagaar ah. Marka iibsato seedling canab, fiiro gaar ah in xididada aan la qalajiyey ama barafoobay.
Booska noocan oo kale ah waxaa lagu beeray god diyaarsan oo la bacrimiyey. At ugu hooseysa Bacriminta organic waxaa laga codsadaa, qaso ciidda. Iyadoo ay ku rusheeyeen bacriminta leh lakab kale oo ka mid ah carrada sahlan, sapling waxay ku dhacdaa god iyo si taxadar leh u jiifsanaya. Waa mid aad u muhiim ah in aan ku rushayn collar xididka leh ciidda - waa inay sii korodhaan dusha sare.
Talaalka jirida ayaa laga jarayaa dhinaca hoose iyadoo leh nooc nooc-u eg, oo ka soo jeeda qulqulka hoose ee yar oo kaliya millimitirkiisa, iyo sidoo kale biyo ku ridaan maalin.
Graft waxaa lagu qallajiyey qaybta hore ee kaydka, oo la nadiifiyay ka hor intaan la jarjarin kadib markii ay ka soo saarto wasakhda. Ka dib markaa, xarkaha si adag ayaa loo dhejiyaa dhar aad u dheer. Tani waxay kicinaysaa xididida gooynta iyo kaydintaan.
Si ay guntooda si xidid ka fiican oo xidid meel cusub, waxaa lagu talinayaa in lagu rusheeyey xal Humate ka hor beerto. Si loo dhammeeyo, wax ka badan 10 dhibcood ee diyaarinta this lagu darayaa 1 litir oo biyo ah, iyo gooyn ayaa waxaa loo yareeyey oo kaliya galay dhowr ilbiriqsi.
Haddii beeritaanka la fuliyo dayrta - hubaal gooyn in ay wax. Tani waxay ka caawineysaa inay adkeeyaan jiilaalka. Si aad tan u sameyso, qaado paraffin oo ku dhalaali daadi biyo. Biyaha iyo paraffin waa in loo oggolaadaa inay karkariyaan. Paraffin ka dhalaalay biyaha dushooda. In aad daqiiqado yar oo aad u baahan tahay in la yareeyo jarida canabka iyo isla markiiba saaro. Ka dib marka la sheygaayo, jirida ayaa isla markiiba ku qaboojisa biyo qabow.
Ka dib markii la beero labadaba kaydka iyo xididdadiisa, jarida si fiican ayaa loo waraabiyaa. Waa inaad isticmaasho ugu yaraan 3 baaldiyo oo biyo ah.
Sidoo kale, waa lagama maarmaan in la qodo taageero meel u dhow canab beeray, kaas oo hagayey koritaanka geedka canabka ah.
Daryeelka saxda ah ee Moldova kala duwan ee canab
Noocyada noocan oo kale ah iyada oo aan daryeel dheeraad ah, formation of qaabka baadiyaha iyo iyada oo aan kudhiisi ma awoodi doonaan in ay bixiyaan goosashada wanaagsan. Iyada oo adkeynaya iyo tiro badan oo canab, sidoo kale iyada oo aan waraabiyo waqti iyo bacarimiso, canab khudradda Moldova yarayn doonaa, goosashada ayaa hoos u dhigi doonaa dhowr jeer.
Waxoogaa yar oo ku saabsan waraabinta habboon ee Moldova ee baadiyaha kala duwan
Qoyaanka noocyada kala duwan ayaa muhiim ah. Sidaa darteed, waraabka caadiga ah ee beertii canabka ah ka hor iyo ka dib xilliga ubax ee kiiskan waa lagama-maarmaan. Marka koraan canab "Moldova" waa muhiim si joogto ah ula soco qoyaanka ciidda. Haddii ay jirto xaalad qoyaan la'aan ah, waraabinta waa in la sameeyaa. Xaddiga waraabinta waxay noqon kartaa hal mar bishii, iyo kordhinta abaarta muddada dheer. Biyaha xad-dhaafka ah waxaa loo wareejin karaa qasacadaha daadsan ee si khaas ah loo qodey ujeedadaas.
Sidee loo daboolaa ciidda ku xeeran canabka?
Mulching waxay leedahay saameyn aad u wanaagsan labadaba koritaanka canab iyo ilaalinta inta lagu jiro jiilaalka adag. Sida mulch waxaa loo isticmaalaa ugu wanaagsan Humus madaxbannaankaas oo loo dhigay hareeraha canabkiinna. Waxa aad ku jiri kartaa meel ku dhow 1 ama 1.5 mitir dhexdhexaad. Maqaarka ugu fiicnaanta lakabka mulch waa 3-3.5 sentimitir. Mulching waxaa lagu talinayaa oo kaliya guga iyo dayrta. Xilliga xagaaga, mulching waxay keeni kartaa uumeysiga nidaamka xididka ee baadiyaha sabiib ah.
Sidee iyo sababta loo daboolayo canab "Moldova"?
Canab waxaa lagu xannibay alwaax. Haddii aad ku beerato gobollada koonfureed, hoyga ma aha mid lagama maarmaan u ah noocyada kala duwan, xitaa mulching fudud ku filan. Laakiin kiis kasta waxaa ka wanaagsan in aad u dhidid badan baadiyaha marka loo eego in lumiyo xilliga jiilaalka. Si loo daboolo baadiyaha kaddib markaad gooyo gebi ahaanba dhulka la dhigo daboolo filim ama kaliya hay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la daboolo ugu yaraan afkoda baadiyaha sabiib ah.
Kalaweelada canabka ah oo kaliya waa inay daboolaan si sax ah. Badanaa waxaa si buuxda loogu daboolay carrada, gelinta weel ballaaran oo aan hoos ugu dhow.
Maxaad ubaahan tahay inaad ogaato markaad bilawdo inaad baadho baadiyaha?
Goynta geedka canabka ah waa in la sameeyaa sanad walba. Xilliga dayrta goor dambe iyo guga goor hore ayaa ku habboon tan. Waxa ugu muhiimsan in geedka canabka ah ee ku yaalla xaalad nasasho. Waxay noqon doontaa midka ugu wanaagsan oo dhan inay midho u dhoofaan ukunta Moldova ee canab, kaas oo leh 3-4 gacmo, si toos ah loogu toosiyo taageerada.
Iska yaree geedka asalka ah ayaa ugu fiican 7-9 indhood, ka baxaya baadiyaha guud ahaan qiyaastii 70 godood. Haddii aad baadiyaha ku sameysid geed dheer, waxaad u baahan tahay inaad gooysid 4-6 indhaha, waana mid aad u muhiim ah in baadiyaha aysan ku dhaafin. Sidaa darteed, guga waxaad u baahan tahay in la xakameeyo ma aha oo kaliya tirada caleemaha, laakiin sidoo kale tirada rucubo in la sameeyay on iyaga.
Cunto "Grapevine" Moldova "
Bacriminta canabku waxay dhacdaa xitaa qasab, inta lagu jiro mulching ee ciidda agagaarka baadiyaha. Si kastaba ha ahaatee, marka lagu daro Bacriminta organic waa mid aad u wanaagsan in bacrimiya ciidda taas oo canab koraan, iyadoo la isticmaalayo Bacriminta macdanta. Wanaagsan inaad sameysid ciidda markaad qodaysid Bacriminta Phosphate potassium.
Sidee loo ilaaliyaa canabka "Moldova" ka soo cayayaanka?
Kala duwanaantani waxa ay saameysaa oo keliya cudur sida noocan oo kale ah. Marna uma baahnid inaad sugtid illaa uu cudurku ka muuqdo baadiyahaaga. Sanad walba oo ku saabsan laba jeer waxaad u baahan tahay inaad qaaddo buufinta ka hortagga ah.
Waxaa lagu qabtaa ka hor inta ubax, on the "madow" canabka ah, iyo ka dib markii canab ah Bloom. Dareeraha Bordeaux waxaa inta badan loo isticmaalaa buufin. Waa inaad si taxadar leh u la socotaa, oo ha isticmaalin diirad ka weyn 1%.